Sidee qoraalka ka iPad mini 3 / iPad Air 2 / iPad Air
> Resource > iPad > Top Siyaabaha dir fariimaha qoraalka ka iPad
Qaar ka mid ah dadka isticmaala iPad weydiiyay "Waxaan qoraal karaa iPad". Sure, aad ogtahay, iPad mar dambe oo keliya shaqeeya sida kiniin ah inuu ciyaaro kulan, dhegaysato muusikada, ama isticmaalo internet-ka. Hadda ma aad samayn kartaa oo kaliya wicitaanada, laakiin sidoo kale soo dir farriimaha qoraalka ah ka iPad. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo qoraal ka soo iPad. Aan ku bilaabaan habka ugu fudud ee qoraalka ka iPad diro.
Text ka iPad dir la iMessage in Users kale Apple
Haddii aad tahay qof aqoon u leh barnaamijyadooda default in la iman iPad ah, waa in aad arki app Messages ee ku yaal. App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimaha qoraalka ah iyo sawiro ka iPad in macruufka qalab kale oo Wi-Fi ama xogta gacanta. Iyo -messaging qoraalka waa lacag la'aan. Haddii aad isticmaasho macluumaadka gacanta u soo dirto iMessage, waxa aad soo eedeeyo oo kaliya adeega xogta gacanta ku, ma fariimaha qoraalka ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud si ay awood iMessage on your iPad u diraan farriimaha qoraalka ah ka iPad.
Tallaabada 1. Hubi in iPad waxa uu ku macruufka 5 ama ka dib. Haddii aanay sidaas ahayn, markaas waa in aad la casriyeeyo.
Tallaabada 2. Isku aad iPad si xasiloon Wi-Fi ama xogta gacanta.
Tallaabada 3. Guddi aad iMessage aad ID Apple on your iPad by dhejinta waaraadka Settings > Messages > dadban iMessage in ON . Tuubada dir & Hesho > tuubada Isticmaal ID Apple aad u iMessage .
Tallaabada 4. In uu furmo suuqa pop-up ah, saxiixo in la ID Apple iyo password aad. Taas ka dib, dadka awood u yeelan doonaan in ay aad u soo xiriir iMessage leh cinwaan email this.
Tallaabada 5. Marka aad u baahan tahay inaad qoraal ka iPad, waa in aad ku sawirnaa app Quraanka> in Messages, ka jaftaa icon Edit ka dibna geli lambarka telefoonka ama cinwaanka email (ama ka jaftaa icon ah si ay u doortaan xiriir a)> nooca qoraalka ama tuubada icon camera ah in lifaaq sawir ama video> tuubada dir dhammayn.
U dir fariimaha qoraalka ka iPad in kasta oo dadka kale ee Mobile Phone
iMessage oo keliya kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimaha qoraalka ah la iMessage kale dadka isticmaala qalabka Apple. Haddii aad rabto in aad u soo dirto fariimaha qoraalka ah ka iPad in aan Apple isticmaala qalab, markaas waa inaad isku daydaa qalab dhinac saddexaad u iPad, sida kuwa caanka ah, WhatsApp , Skype, Facebook Rasuulka.
Haddii aad isticmaalayso iMessage, WhatsApp ama Facebook Rasuulka loo diro loona helo fariimaha qoraalka ah ee iPad, ka dibna mar kasta oo aad ula kac ahayn iyaga tirtirto, oo aad iyaga ka heli kartaa dib u adigoo raacaya tilmaan- ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray >>
Ma u diri kartaa ama waxay helayaan farriin qoraal - xaliso dhibaatada ka
Transfer hawada File iPad: Transfer Faylal ay si / ka kaaftoomi doono hawada si xor ah iPad
Sidee loo Isticmaalaa canabka Wixii iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Music, Video, Photos, Calendar, Messages iyo xidhiidhka ka dhexeeya H
Sidee si ay u gudbiyaan Video ka iPad in iPad
2 Methods si ay u gudbiyaan Music hawada iPad in Computer ah
Sida loo Guba mini iPad 2 videos in DVD